Fanomezana mari-boninahitra : hadino tanteraka i Augustin Baovola | NewsMada
Fanomezana mari-boninahitra : hadino tanteraka i Augustin Baovola
Nandringa ny fanomezana mari-boninahitra ho an’ny atleta, notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena. Noho ny tsy fahalalana angamba, nisy ireo olona tena kalaza, tsy nahazo izany.
Samy taitra avokoa ny mpanatrika rehetra, tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena omaly, indrindra fa ireo mpanara-baovao tsy nahatazana an’Andriamiharinosy Augustin Baovola, ilay kintan’ny baolina kitra malagasy fanta-daza hatramin’izay ka hatramin’izao, fa tsy tao anaty lisitr’ireo atleta nomena sy notolorana mari-boninahitra sy mari-pankasitrahana.
Asa na noho ny tsy fahalalan’ireo tomponandraikitra, ny lazany sy ny tantarany na nisy antony hafa, ny tsy mba nanomezana azy, izany.
Raha tsiahivina, anisan’ny nahalalan’izao tontolo izao an’i Madagasikara i Augustin Baovola. Izy no mpilalao baolina malagasy voalohany, nisantatra ny filalaovana tany am-pitan-dranomasina ary nampalaza ilay fiteny hoe : “expatrié”. Havanana amin’ny famonoam-baolina i Augustin Baovola, hany ka mbola izy hatreto no mitana ny laharana voalohany, amin’ny famonoam-baolina be indrindra, eto Madagasikara, izay tsy mbola nisy nahasongona.
Ankehitriny, efa mipetraka eto an-tanindrazana izy ary mitantana ny sekolin’ny baolina kitra ao amin’ny kolejy St Michel, izay efa nandrombaka ny tompondakan’ny ligin’Analamanga ny sokajy U14 sy U20.
Anisan’ny tranga mampalahelo ny toy izao, satria any am-pita, tena reharehan’ny firenena iray manontolo sy ny vahoaka ao aminy ny fananana olo-malaza, indrindra eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena. Raha tsy hilaza afa-tsy “le Roi Pele”, izay mbola isehosehon’ny Brezilianina tanteraka ary andrandrainy amin’ny fotoana rehetra. Toy izany koa i Maradona, ho an’ny Arzantina. Na teo aza, ny fahotana mahafaty vitany sy ny fanalam-baraka nataony, tsy nisitrika na niondrika ny vahoaka Arzantin fa mbola mirehareha manana azy, ary manome haja sy laza an’i Maradona.
Ny an’ny Portiogey, moa tsy nanaovany tsangam-bato mihitsy i Cristiano Ronaldo mba hahalalan’ny rehetra fa io no “star”-ny. Aleo mba homena ny toerany sy ny hajany amin’izay ny an’i Madagasikara, ka tsy sanatria maty vao ramalala.